अन्जना के.सि. - ‘कभि साम ढले तो मेरे दिल में आजा ना कभि चाँद खिले तो मेरे दिल में आजा ना... मगर आन इस तरह तुम फिर यहाँ से नाजा ना तुम म झसंग ब्युझिएँ, बाहिर हेरेँ, अँध्यारो थियो। सिरानीमुनि रहेको मेरो मोबाइलमा यो गीत गुञ्जिरहेको थियो। मोबाइल हेरेँ, फोन आएको रहेछ अम्बुको।
अनि भन्न थाली– हिजो अफिसबाट अलि छिटै फर्किएँ । बत्ती गएकोले काम भएन, चिसो पनि थियो, घर आएर खाना पकाई अशोकलाई धेरैपल्ट फोन गरेँ, फोन अफ थियो। टिभी हेरेर बसिरहेँ, अशोक आउला र खाना खाउँला भनेर । धरै राति भैसक्यो ऊ आएन । म नखाई सुतेकी थिए राति १२ बजे बल्ल रक्सीले मातेर आएको थियो। मैले सोधेँ– आज पनि आउन ढिला गर्नुभयो त ? ढिला हुने भएपछि त जानकारी दिनुपर्छ नि । फोन पनि अफ थियो । एउटी स्वास्नीको नाताले सोध्ने अधिकार त हुन्छ नि ! त्यही अधिकार प्रयोग गरेकी थिएँ।
अम्बुका दाइले नसोधेका पनि होइनन् तर अम्बुले म अरुलाई माया गर्छु र उहीसँग बिहे गर्न चाहन्छु भनेर दह्रो जवाफ दिन सकिन। किनकि ऊ दोधारमा थिई । गम्भीरसँगको प्रेम झांङ्गिएको थिएन । आफ्नो बिहेको कुरा चलिरहेको भन्नलाई पनि त्यहीबेला गम्भीरसँग सम्पर्क भएन । ऊ अमेरिका थियो । मेल लेखी। फोन गरी तर केही सिप लागेन। गम्भीरको जाँच परेकोले सम्पर्क नभएको कुरा पछि थाहा भयो।
यो कुरा अशोकलाई भन्ने निर्णय गरी। अशोकलाई उसले एक्लै भेटी, आफ्नो र गम्भीरको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दै उसले विहे गर्न नचाहेको कुरा बताई। अफसोच ! अशोकले बिभिन्न शब्दमा अम्बुको उपहास गर्‍यो। ‘यो तिम्रो उमेरको उन्माद हो, उमेरले जन्माएको आकर्षण हो, प्रेम होइन, उसले तिमीलाई बिहे गर्ने उद्देश्यले होइनकी बास्नाका निमित्त नजिक भएको हो। त्यसैले तिमी उसको प्रेमिकाभन्दा मेरी पत्नी भएर खुसी हुन सक्छयौं।
मलाई घृणा जागेर आयो, जसले छलफल र सहकार्यबाट समस्या समाधान नगरी, धम्की, कुटपिट र यातनाबाट आफ्नो पुरुषत्व देखाउने पुरुषमाथि । नारीलाई मौजमस्ती र खेलाउना ठान्ने पुरुषमाथि । मेरो ध्यान भंग गर्दै ‘बिरामीको तपाईको पर्नुहुन्छ ?’ डाक्टरले बोलाउनु भाको छ। एक जना पातलो शरीर गरेकी नर्स छेऊमा आएर भनेर भित्रिइन्। म भित्र डाक्टरको छेऊमा गएँ । बिरामीको टाउकोमा रगत जमेको छ । उहाँलाई बचाउने हो भने तत्काल अप्रेशन गर्नुपर्छ। ब्लड चाहिन्छ, लिएर आउनुहोला भन्दै डाक्टर बाहिरिए । म आँखाभरि आँशु लिएर अम्बुलाई बचाउने तरखरमा लागेँ ।